बाँसबारी छाला जुत्ता र जनकपुर चुरोट कारखाना कांग्रेसले बेचेकै हो: विश्व प्रकाश [भिडियो सहित]
काठमाडौँ- कंग्रेसले पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले आज आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले सविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका देखि लिएर स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव गराउन खेलेको भूमिकाको चर्चा गरेका छन् ।
यस्तै उनले बाँसबारी छाला जुत्ता र जनकपुर चुरोट कारखाना कांग्रेसलेनै निजी क्षेत्रलाई बेचेको पनि बताएका छन् । जनताको लागि सरकारले चुरोट उत्पादन गर्न नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई बेचिएको बताएका छन् ।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेचेर पनि कुनै गल्ति नगरेको बताएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजी क्षेत्रलाई बेचेसँगै अहिले निजी क्षेत्रमा जुत्ता कारखाना खोल्ने लहरनै चलेको स्पष्ट पारेका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद् रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचन मार्फत वामदेव गौतमलाई सांसद् बनाउने कुरा चलिरहेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मानन्धरले आफू वामदेवलाई सांसद् बनाउने हेतूलेनै राजिनामा दिन लागेको बताएका थिए। यससँगै अहिले मानन्धरको विरोध र समर्थन दुबै भैरहेको छ।
काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ७मा हुने पुन निर्वाचन भएमा वामदेव विरुद्ध कंग्रेसले पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मालाई उठाउने सम्भावना रहेको हल्ला पनि चल्न थालेको छ। तर बिगुल न्युजसँग कुरा गर्ने क्रममा विश्व प्रकाश शर्माले आफू पुन निर्वाचनमा उठ्ने हल्ला गलत भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा उनी झापा १ बाट उठेका थिए। तत्कालिन समयमा उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सुरेन्द्र कुमार कार्कीसँग २८६३ मतले पराजित भएका थिए।
आफू एकपटक जनताबाट निर्वाचित हुन नसकेको हुँदा जनचाहना विपरित काठमाडौं क्षेत्रनम्बर ७ बाट पुन निर्वाचनमा भाग नलिने बताउँछन्।
प्रकाशित : बुधबार, असोज २४, २०७५१९:४४
वामदेवका लागि पद त्याग गर्न तयार रामवीरलाई दिइएको सम्मान खोसिने ! आक्रोश सहित विज्ञप्ति !
‘टेलियाबाट कर असुल्न यस्ताे छ कानुनी उपाय’
रामवीरले राजीनामा दिन नपर्ने, यस्तो छ कारण
” जनताले भाषण होइन, दोषीमाथि कडा कारबाही होस् भन्ने चाहेका छन् ”
“ म व्यक्तिलाई होइन पार्टी र संगठनका कामलाई प्राथमिकता दिन्छु, संगठन बलियो भए मात्र पार्टीमा सबैको हित हुन्छ”
‘काठमाडौँमा भारतीय रेल आउनुपर्छ’